Ngwa ngwa igwu mmiri 6 kacha mma maka gam akporo | Gam akporosis
Ngwa egwu igwu mmiri 6 kacha mma maka gam akporo
Otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu n'ụwa bụ, enweghị obi abụọ, igwu mmiri. Ọ dị nke ukwuu nke na etinyere ya n'egwuregwu Olimpik na ụdị asọmpi a ma ama, yana ịbụ nke a na-eme ebe niile. Naanị n'ihi nke a, anyị na-ewetara gị ọkwa a, nke ị ga-ahụ ndepụta nke ọtụtụ ngwa ga-enyere gị aka ịmụ igwu mmiri na ihe ndị ọzọ gbasara egwuregwu egwuregwu a ma ama.
Na mkpokọta a ị ga-ahụ 6 kacha mma ngwa egwu maka gam akporo nke ahụ bụ taa na Playlọ Ahịa Google Play. Ihe niile edepụtara n'okpuru bụ n'efu ma na-enye usoro ntanetị dị iche iche, nkuzi nkuzi, na ndị ọzọ.
N'okpuru anyị jikọtara gị usoro nke ngwa ngwa igwu mmiri 6 kacha mma maka mobiles gam akporo. Okwesiri ighota, dika anyi na eme, na ndị niile ị ga-ahụ na mkpokọta akwụkwọ a bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ụdị ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile. Agbanyeghị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemụ nkwụnye ego dị n’ime, nke ga-enye ohere ịnweta nnabata ọdịnaya n’ime ha, yana atụmatụ adịchaghị mma na nke dị elu. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ịmeghachi. Ugbu a ee, ka anyị gakwuru ya.
1 Coach Swim - Nkuzi p. Igwu na Triathlon
2 Igwu mmiri - Ọzụzụ Igwu mmiri
4 SwimtoFly - Mụta otu esi egwu mmiri, kuziere ihe, chọta onye nkuzi
5 Ogige SWIM | Bido igwu mmiri taa!
6 Igba mmiri nke Igba mmiri
Coach Swim - Nkuzi p. Igwu na Triathlon
Iji zụọ, kuzie ma mụọ igwu mmiri, Swim Coach - Workouts p. Igwu na Triathlon bụ ezigbo ngwa na otu nke kachasị mma anyị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Play maka gam akporo smartphones. Na ngwa ọrụ a anyị nwere ike ịka mma na egwuregwu a site na iji ọgụgụ isi na ahaziri ọzụzụ ọzụzụ maka ọkwa na onye ọrụ ọ bụla.
Ngwa a na - arụ ọrụ dị ka onye nchịkwa ọzọ iji nyere gị aka ịkwadebe maka mmemme triathlon ma ọ bụ igwu mmiri. Mee ka usoro gị dịkwuo mma ma jiri mmiri ozuzo na ntuziaka ya na gị, nke dị ọtụtụ ma dịkwa mfe nghọta. N'otu oge ahụ, -enyere gị aka idobe ọnọdụ ahụ gị nke ọma na, ọ bụrụ na ịnweghị ya, iji nweta ya. Ọ bụkwa ezigbo ngwá ọrụ ịhapụ ibu, ebe ị nwere ike iji ndụmọdụ na mgbatị ahụ na-eme ka abụba gbaa ma nweta oke dị mma.
Aka na ihe karịrị mmemme 40 maka ndị na-egwu mmiri, Igwu mmiri anọ na-eru nso ịhọrọ site na (allround, teknụzụ, iku ume na nguzogide) ma nye gị ohere ịdekọ ọganihu gị na ọzụzụ ọzụzụ, yana ịmepụta usoro ọzụzụ ọzụzụ igwu mmiri na ịkekọrịta mgbatị site na email. A gụnyere nke a na ọrụ ndị ọzọ na Swim Coach version, nke bụ nke nweere onwe ya.
Swim Coach Gold bu ugwo ugwo ma nke a zuru oke, ya na ihe kariri omume 240 maka ndi na egwu mmiri na ihe ndi ozo, ya mere o di nma karie mgbatị ndi kari, nke n’eme ka i nweta nsonaazụ kacha mma. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na ndekọ oge igwu mmiri nke anya nke 50 m, 100 m, 200 m na 400 m, n'etiti ọrụ ndị ọzọ.
Onye nkuzi igwu mmiri - Ọzụzụ Schwimm
Developer: Nsogbu Kaul
Igwu mmiri - Ọzụzụ Igwu mmiri
SwimUp bụ ezigbo ngwa igwu mmiri maka gam akporo nke ejiri onyinye dị iche iche atụmatụ, sessions na igwu Atụmatụ ka mma Usoro na utịp ke anya na oge ikpe asọmpi. Enwere ọtụtụ ndụmọdụ igwu mmiri, usoro ihe omume, nyocha ọgụgụ isi na echiche echepụtara iji meziwanye usoro mmụta gị.
Na SwimUp ị nwere ụzọ anọ igwu mmiri, niile bara uru, ha bụ ndị a; Nwere ike ịhọrọ nke ịchọrọ na nke kachasị mma maka ihe ị na-achọ na ọnọdụ gị ugbu a:
Ọdịmma: oge igwu mmiri (akwadoro maka ndị mbido na ndị chọrọ igwu mmiri maka ntụrụndụ)
Usoro: na-emezigharị mmegharị mmiri na nkà (akwadoro maka ndị nwere ahụmahụ na-enweghị usoro igwu mmiri)
Ndị nkuzi: na-achọ mmega ahụ na ọzụzụ maka ndị na-egwu mmiri nwere ahụmahụ (akwadoro maka ndị na-egwu mmiri ọkachamara chọrọ ịkwalite arụmọrụ ha na asọmpi)
Triathlon: usoro na usoro ọzụzụ pụrụ iche maka igwu mmiri na Triathlon (akwadoro maka ndị egwuregwu atọ na-achọ inweta nsonaazụ kacha mma na asọmpi triathlon ndị a)
A na-emegharị nhazi na ọzụzụ ọ bụla maka mkpa onye ọrụ, ihe na-eme ka ọ bụrụ otu ngwa nke kachasị enyere aka melite ma mụta usoro igwu mmiri na ọdọ mmiri na mmiri emeghe. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na vidiyo nkuzi na-akọwapụta ihe nke na-akụziri gị ihe niile ịchọrọ maka egwuregwu mmiri, nkọwa zuru ezu banyere ụdị igwu mmiri niile dị ka urukurubụba, freestyle, breaststroke, backstroke na ndị ọzọ, na ọtụtụ ọrụ na atụmatụ ndị ọzọ.
Developer: Igwu mmiri
Otu ụzọ kachasị mma iji mụta igwu mmiri ma melite usoro igwu mmiri bụ site na vidiyo igwu mmiri. GoSwim maara ya ma ya mere Ọ nwere akwụkwọ akụkọ vidiyo nke ga - enyere gị aka ị nweta nsonaazụ igwu mmiri dị mma na ọdọ mmiri na mmiri emeghe, tinyere ụzọ izi ihe dị mfe nghọta ma bụrụkwa nke a na -akpokọta, ma nke ndị ọkachamara ma ndị mbido na ndị ọhụrụ. Nke a bụ usoro vidiyo ngwa maka USA-Igwu, ya mere ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye.
Enwere ihe dị ka puku vidiyo 4 na-atọ ụtọ nke na-egosi otu esi amụta, melite ma zuo oke usoro na ụdị igwu mmiri kachasị ewu ewu ma jiri asọmpi. Ọ baghị uru n ’ọkwa gị; na GoSwim ọ dị mfe ịmụ, ọ bụ ezie na ị ga-ewepụta oge iji hụ ọdịnaya niile ọ nwere inye, ebe ọ bụ na ọ sara mbara ma dịgasị iche iche.
Kwa izu enwere isiokwu dị iche, nke a na-atụ aro ụzọ dị iche iche nke mmụta n'ọtụtụ usoro dịka ịda ụda na ndị ọzọ. Isiokwu ndị a na-esonyere obere nkọwa nkọwa banyere ha. Ndị a na-ekpuchi ụdị igwu mmiri anọ dị ka ihe dị n'ihu, ịkpụ azụ, akwa ara na nru ububa.
Have nwere ọtụtụ mmega ahụ na mgbatị ime a na ngwaỌ na-arụkwa ọrụ dịka ngwa ọrụ nkuzi bara uru na-enweghị ọtụtụ echiche na-enweghị isi, nke na-eme ka usoro mmụta bụrụ ihe mgbagwoju anya nye ọtụtụ ndị. O nwekwara ihe mgbako SEI nke enwere ike iji gbakọọ akara akara Stroke arụmọrụ.
Developer: Gaa na Mmepụta
SwimtoFly - Mụta otu esi egwu mmiri, kuziere ihe, chọta onye nkuzi
SwimtoFly bụ ezigbo ngwa igwu mmiri maka gam akporo n'ihi na ọ na-enye vidiyo na-enweghị nkọwa dị ka nkuzi nke na-akụziri gị otu esi egwu mmiri ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị maraworị, otu esi emeziwanye ụdị gị. A raara ya nye ndi oru ndi ozo na ndi mbido yana ndi okacha amara na ndi okacha amara, nke bụ ya mere na nkewa dị ka otu n'ime ihe kachasị rụọ ọrụ nke ọma na mpaghara mmụta. Otú ọ dị, vidio ndị o nwere dị nanị n’asụsụ Bekee, ọ bụ ezie na a pụrụ ịghọta ọtụtụ n’ime ha nanị site n’ikiri ha, nyere ha otú ha pụrụ isi jiri ha mee ihe.
Enwere nkuzi 5 na SwimtoFly ngwa:
Jiri obi ike gwuo mmiri
N'ihu iri ari
Nwere ike ịdebe ngwụcha nke oge ọ bụla mgbe nkuzi ọ bụla na-egwu mmiri n'ịntanetị, yana ịdekọ anya mmiri igwu mmiri na oge igwu mmiri emere iji meziwanye ọsọ mmiri.
SwimtoFly🏊 Mụta otu esi egwu mmiri, kuziere ihe, chọta onye nkuzi
Developer: SwimtoFly Pte. Njikọ
Ogige SWIM | Bido igwu mmiri taa!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ọzọ ọzọ na nhọrọ akọwapụtara n'elu, Arena SWIM bụ ụzọ dị mma iji mụta ma melite ụzọ ị si egwu mmiri na ọdọ mmiri na mmiri emeghe. Ngwa a na - enye gị ohere ịmepụta ezigbo ọzụzụ na omume maka ebumnuche gị na ebumnuche gị.
Ọ dị mfe iji melite mmụba nke ụdị igwu mmiri dị iche iche na ngwa a, yana ịbawanye mkpa na nnọkọ siri ike ma ọ bụ naanị ijide ya; arena SWIM biara na omume di iche-iche ka i wee wee rite uru ma di nma na igwu mmiri.
Have nwere ọtụtụ mmemme ọzụzụ iji meziwanye usoro gị na mmiri, na atụmatụ, usoro ihe omume na nnọkọ ị nwere ike ịhọrọ, dabere na mkpa na ụtọ gị. Mee ka mmegharị gị dịkwuo mma maka nsonaazụ kacha mma na egwuregwu mmiri. Enwekwara ngalaba akụkọ, nke ị nwere ike ịchọta ọtụtụ akụkọ, ma site na ndị nkuzi na ndị na-egwu mmiri. N'aka nke ya, enwere ngalaba a na-akpọ "My List" nke ị nwere ike ịchekwa mgbatị na atụmatụ kachasị amasị gị ma ọ bụ ịchọrọ ịme mgbe e mesịrị, n'oge ịchọrọ.
Ngwa a nwere ọtụtụ puku nbudata na Playlọ Ahịa gam akporo na ibu ibu nke karịrị 20 MB. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma iji mụta ma melite igwu mmiri, ọ bụ ya mere anyị ji etinye ya na post a chịkọtara.
aja SWIM | Ka anyị nwee obi ụtọ!
Igba mmiri nke Igba mmiri
Ọ bụrụ n’ịchọrọ imeziwanye usoro igwu mmiri gị, ngwa ọrụ dị mma maka nke a bụ elekere nkwụsị ma ọ bụ, na nke a, ngwa nke na-arụ ọrụ a ma bụrụ ọkachamara n’igwu mmiri dịka Igba mmiri nke Igba mmiri.
Naanị ị ga-ahọrọ ma hazie data ndị a: onye na-egwu mmiri, ogologo nke ọdọ mmiri na ụdị ule ahụ, ọ bụrụ na ọ bụ Ọzụzụ ma ọ bụ Asọmpi.. Can nwere ike iji oge gị rụpụta nsonaazụ na ngwa a, iji tụọ ọganihu gị n'ụzọ na-aga n'ihu ma hụ n'ezie ole na ngwa ngwa usoro igwu mmiri gị na-emewanye nke ọma na ọdọ mmiri ma ọ bụ mmiri na-emeghe. Ihe bara ezigbo uru bụ nhọrọ ịkekọrịta oge gị site na email na ngwa ndị ọzọ, nke ị nwere ike ime ka ndị enyi gị mara otu ị siri gaa ọsọ na mpaghara ndị ọzọ.
Kwụsị igwu mmiri na-ekiri n'efu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa egwu igwu mmiri 6 kacha mma maka gam akporo
Ngwa 5 kachasị mma iji gụọ calorie na gam akporo